Misirroota gaa’elasaanii Irreecharratti raawwatan
Onkoloolessa jalqabaa keessa Magaalaan Bishooftuu akka nama guyyaan cidha isaa/ishee itti ga’ee ko’amattee turte. Sababni isaas guyyaan addaa Oromoon hawwii guddaan eeggatuufi bakka guddaa kennuuf Irreechi Malkaa waan kabajamuufi. Irreechi Malkaa, Horaa Harsadeetti bifa miidhagaa ta’een kabajamu kun yeroo maraa Masqalli ba’ee Dilbata itti aanuu bakka Oromoon bakka addaddaa irraa dhufee walitti qabame kan kabajatudha. Bishooftuunis ayyaan guddaa kana kabachuuf egaa jala bultii irraa kaastee kan ko’ammatte. Egzibishiniifi baazaariin, konsariiwwan muuziqaa, agarsiifni aadaa, mariin paanaaliifi wantoonni ayyaanicha miidhagsan addaddaa kan gaggeeffamaa turanis torbanuma darbe keessa ture.